August 2014 - ★★ Welcome To My Friend ★★
10:21 PM Android, Game No comments
ဘောလုံးဝါသနာအိုးများအတွက် Madden NFL 25 by EA Sports v1.1.apk
ဒီတစ်ခါ အမေရိကန်ဘောလုံးဝါသနာအိုးတွေအတွက် ဒီဂိမ်းလေးဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ Online ရှိရုံနဲ့ အ၀ဆော့လို့ရပါပြီဗျာ။ ဖိုင်ဆိုက်က 17MB ရှိပါတယ်။ September 27,2013 ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/WYk8H မှာကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
10:19 PM Android, Game No comments
Real Steel World Robot Boxing v2.1.27 [ပိုက်ဆံခိုးလို့ရ] apk
ကျွန်တော်လည်း ပိုစ့်မတင်တာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ စာမေးပွဲဖြေနေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ android ဂိမ်းတစ်ခုတင်လိုက်ပါပြီ။ ပိုက်ဆံလည်းခိုးလို့ရတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Google Play မှာ Game Rating က 4.6 ရရှိထားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ Coins infinite cheat ပါပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/Xjxml မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
6:49 AM Gmail & Gtalk No comments
စောယုမွန်...: G mail အကောင့်ဖျက်တဲ့နည်းလေးသိချင်ပါတယ်။
Gmail တစ်ခုဟာ သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်တိုင်မဖျက်သမျ မပျက်ပါဘူး.. အဲဒီ Gmail ကိုလည်း မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင် ဖျက်ပစ်ဖို့ နည်းလမ်းလေး ပြောပြပါမယ်.. ဒီနည်းက လုံးဝ ပြန်ဆည်လို့မရတော့ဘူးနှော်..
1. ဖျက်ပစ်မယ့် Gmail ကို Sign In ဝင်လိုက်ပါ..
2. ညာဘက်နားက စက်သွားပုံလေးကိုနှိပ်ပြီး Setting ကိုဝင်ပါ.. ( Basic HTML နဲ့ဆို Setting ကို မြင်ရပါတယ်)
3. ပေါက်လာတဲ့အကွက်ထဲမှာ အပေါ်တန်းက Account (သို့မဟုတ်) Account and Import ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် အောက်နားမှာ Other Google Account Settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
4. Tab တစ်ခုခွဲထွက်လာပါမယ်.. အဲဒီထဲမှာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းထဲက Products ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
5. Product ထဲကိုရောက်လာပြီး Your Product ရဲ့ဘေးက Edit ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
6. Tab တစ်ခု ခွဲထွက်လာပြီး Remove Gmail permanently နဲ့ Close account and delete all services and info associated with it ကိုနှိပ်ပြီး ဖျက်လိုက်ပါတော့..
ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အီးမေးဟာ လုံးဝ ပျက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
နေဆက်သော် ( နည်းပညာ )
ကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့် Member ၀င်သွားစေလိုပါတယ်
တင်သမျှ Facebook ပေါ်ကဖတ်ချင်ရင် Like ပေးခဲ့ပါ
6:39 AM Android, E-Book No comments
Android Firmware တင်နည်း စုစည်းမှု (Myanmar E-Book)
ကဲ စိတ်ဝင်စားသူများ ဒေါင်းယူ အသုံးပြုနိူင်ပါပြီး
ဒေါင်းရန် .. ဒီမှာ ဆိုတာ ကို နှိပ်ပြီး ၀င်ရောက် ဒေါင်းယူပါ
1:26 AM MP3 No comments
King of Sex (Limited Edition) Mp3 [Listen online/Download]
အခု DJ Wine လုပ်ထားတဲ့ King of Sex (Limited Edition) ကိုမျှဝေပါအုံးမယ်။ Album ကတော့ Traditional Chill 2013 ပါ။ နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ သီချင်းက ၆မိနစ်စာ ကြာတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ နားထောင်လို့အဆင်ပြေအောင်လည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ နှစ်သက်ရင်တော့ Download ဆွဲလိုက်ပါ။ အခုလို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Download Now (ဒေါင်းလော့ဆွဲရန်ဒီကိုနှိပ်)
Listen Now (နားဆင်ရန်ဒီကိုနှိပ်)
12:04 AM Android, Software No comments
ဖုန်းထဲမှာ MP3,4 သီချင်းတွေကိုဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ချုံ့မယ်..။
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Format Factory လေးပါပဲ
ကွန်ပြုတာတွေမှာလည်း ဒီဆော့ဝဲလေးက ရေပန်းအစားဆုံးပါပဲ
အခုဒါလေးက ဖုန်းတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါ
ဖုန်းနဲ့ MP4 တွေ MP3 တွေကိုဆိုဒ်သေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
VIBER မှာ 10MB ကျော်ရင်ပို့လို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေပေါ့
ကျနော်လည်း အချိန်မရတော့ တနေ့ကို တစ်ခုလောက်ပဲတင်နိုင်တယ်..
3:44 PM Android, Launcher No comments
ဖုန်းထဲမှာ I con တွေကို လှပစွာထားရှိနိုင်မဲ့one v1 APK
ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူများအတွက် မိမိဖုန်းထဲမှာ icon ကိုတွေကို
အောက်မှာ DOWNLOAD Link ရယူပါ။
4:36 AM Android No comments
ဖုန်းထဲမှာ လုံးဝထုတ်လို့မရတဲ့ Software တွေကို ထုတ်မယ်
အလွယ်တစ်ကူထုတ်ပေးတဲ့ apk လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ကျွန်နော် ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က
ကျွန်နော်ဖုန်းမှာ ထုတ်ပစ်လို့ မရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုကို သူက ထုတ်ပေးဖို့ အဲ့ဒီဆော့ဝဲလေးကိုပေး
လာပါတယ်။။သူပြောတဲ့အတိုင်းထုတ်ကြည့်တာ အရမ်းကိုလွယ်ကူလှပါတယ် ဖုန်းဝယ်လာတဲ့သူတိုင်း
ကိုမကြိူက်မနှစ်သက်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတာကို ထုတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်
ကွန်ဗျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြူလို့ လည်းရပါတယ် အဲ့လိုမှမပာုတ် မိမိဖုန်းထဲမှာပဲအသုံးပြုချင်ရင်
လည်းရပါတယ် လုပ်ဆောင်းရမယ်နည်းလမ်းကတော့ မိမိ ဖုန်းထဲမှာ အောက်မှာကျွန်နော်ပေးထား
တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဒေါင်း.ယူသွင်းလိုက်ပါ ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် မိမိထုတ်ပစ်ချင်တော့
ဆော့ဝဲလ်လေးကို အမှတ်ချက်လေးပေးပြီး အမ်ပထိတ်လုပ်ယုံပါပဲ..အဲ့တာဆို အိုကေပါပြီ
အခုမှလေ့လာသူတစ်ယောက်မို့ လို့ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
အောက်မှာ DOWNLOAD Link ရယူပါ
DOWNLOAD >>> ၊
4:12 AM Software No comments
ကျွန်တော်အင်တာစသုံးတဲ့အချိန်ထဲကသုံးခဲ့တာကတော့ မော်ဇီလာ Browser ပါ အခု
အင်တာနက်သုံးတဲ့ အခါ မော်ဇီလာထက် ပိုမြန်တဲ့ Browser လေးတခုဖြစ်တဲ့ Maxthon4- 4.1.2.4000Final
ဗားရှင်းလေးကို မြန်မာစာပါ ဖော်တတ်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ ပြန်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.. လုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး မသိသေးတဲ့ သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူပြီး.. ပုံလေးတွေနဲ့ မြန်မာစာ ပေါ်အောင် ဖော်နည်းကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ..။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 32 MB ရှိပါတယ်..။
နောက်တစ်ခုက FB တွေမှာ အော်တို ဒေါင်းလွတ် ဆွဲလို့ ရအောင်ဖန်တီးပေးထားသေးတယ်ဗျာ အရမ်းကို
အဆင်ပြေတယ်.မိမိဖွင့်လိုက်တဲ့ ၀ိုက်ဆိုဒ်တစ်ခု တွင် မိမိမသိနိုင်တဲ့ဗိုင်ရစ်တွေကို သူကို ချင်းခြင်း သိနိုင်
စွမ်းရှိပြီးချင်ခြင်း ပာပ်ချပေးသွားပါတယ်။ အရမ်းကိုစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ Browser လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံအတိုင်း Install ထည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Setting မှာ ဝင်ပြောင်းပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ..။
အောက်ဆုံး ပုံလေးအတိုင်း မြန်မာစာ ရေးလို့ ၊ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေပါပြီ..။
DOWNLOAD >>>> MAXTHON BOWSER (4- 4.1.2.4000 FINAL )
8:01 AM Facebook No comments
6:26 AM Android, Downloader, Facebook No comments
Facebook ပေါ်မှာ Video တွေကို Download ဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ သိပြီးသားသူတွေအတွက် ကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ app ကတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဖိုင် size က 1.9MB လောက်ပဲရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် version က 1.1 ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်တာကတော့ မတ် ၂၅ ၂၀၁၄ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/r0nuW မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
With video downloader for Facebook you can now download videos and photos from Facebook directly to your phone. You can now download Facebook videos uploaded by you, Videos you are tagged in, Videos uploaded by your friends, Videos from liked pages and groups too.Also check out our huge collection of funny / crazy videos. You can easily download them and save them to your gallery.
Download links => Link 1 / Link 2
11:40 PM Computer ဆိုင်ရာ No comments
USB Collection (USB အတွက် ဆော့ဝဲလ် များ စုစည်းပေးခြင်း)
USB Collection လို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တာကတော့ အစုံအလင်ပါပြီး တစုတစည်းထဲ ရအောင်စုစည်းထားတာလေးဝေမျှလိုက်တာပါ။လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာ ကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြည့််ပြီးဒေါင်းလုပ်သာယူသွှားလိုက်ပါ။အခုလိုတနေရာထဲမှာယူအက်စ်ဘီနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေ အများကြီးဝေမျှပေးလိုက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တော့တော်တော်ပီတိဖြစ်မိတယ်ဗျာ။
1 .ID USB Lock Key
2. USB Lock 3.2.6.05
3. MyUSBOnly_v5.9 Multilingual
8. USB Disk Security 5.4.0.12
9. USB Disk Security 5.4.0.6
10. USB Disk Security 6.0.1.2
11. USB Disk Security 6.0.1.2
12. USB Flash Security v 3.3.0 Latest
14. Password Protect USB 3.6.2
19. usb safely remove 432
24.USB.Flash.Drive.Data.Recovery.v7.0 WinALL Cracked
MMiTD မှ ကိုချစ်ရဲ့ ပို့လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ.. ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်ဆိုရင် အပေါ်ကLink ကနေတဆင့် ကိုချစ် ကိုကျေးဇူးတင်စကား သွားရာက်ပြောကြားနိုင်ပါတယ်....:)
10:33 PM Software No comments
Mobile iPhone / Android / Windows / BlackBerry PC Windows / Mac OS X
မှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် http://line.naver.jp/en/မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အခြား အမျိုးစားတွေနဲ့သိပ်မကွာပါဘူး
ကွာတာတစ်ခုက ဟာသပုံ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ ပါတဲ့ အချက်ပါဘဲ မှုရင်းဆိုဒ်မှာလေ့လာကြည့်ပါ
9:14 AM Game No comments
Where's My Water?2က Free လေးပါ။ အခုထက်ထိ နောက်ဆုံးထွက်ပါ။ Google Play မှဆွဲရတာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် အထူးတလည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Version က 1.2.3 ဖြစ်ပါတယ်။ မိကျောင်းလေးကို ရေရဖို့အတွက် မြေကြီးတွေတူးပြီး ဆော့ရတဲ့ဂိမ်းလေးပါ။ ဇူလိုင် ၁၈ ၂၀၁၄ မှနောက်ဆုံးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးသိချင်ရင်တော့ http://adf.ly/qwHjW မှာဖတ်ကြည့်ပါ။
Download links => Link 1/ Link 2